Indawo yokuhlala yaseArabia eMadinaty
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMamdouh
Ibekwe kwenye yezona ndawo zibalaseleyo kwindawo yeB7-Madinaty, New Cairo; Ifulethi linikezela ngokufikelela okugqwesileyo kwizinto eziluncedo kunye neenkonzo ezikufutshane (okt ikofu, ikhemesti, ivenkile, iivenkile, iklabhu yezemidlalo njl.njl.) kwaye ngumgama wokuhamba ukuya kwisikhululo sebhasi kunye ne-Southwest mall.
+ Le ndlu igudiswe ngamaplanga ngokupheleleyo, igcina imvakalelo efudumeleyo nepholileyo ebusika, kunye nemozulu epholileyo ehlotyeni, ineengcango zomthi ezizodwa ezenziwe ngezandla.
+ Ubungakanani obuhle bekhitshi lemveli elinefestile enkulu elungisiweyo evumela ukukhanya okuninzi. Kukwafakwe nesipheki sombane esakhelwe ngaphakathi, ukongeza kumatshini wokuhlamba, ifriji, ibhoyila i-oven yombane, kunye nemicrowave.
+ Iindonga zegumbi lokuphumla zigqunywe ngokuyinxenye ngamatye endalo njengoko kubonisiwe kwimifanekiso encanyathiselwe.
+ Ifulethi lifakwe ngokupheleleyo kwaye linazo zonke izixhobo eziyimfuneko uninzi lwazo zintsha kraca (ii-AC ezimbini, i-49inch smart Samsung TV kunye nobhaliso lweprimiyamu yeNetflix, umatshini wokuhlamba, izifudumezi, ithowusta, umatshini wekofu, amakhethini e-IKEA / amakhava amatsha njl.njl. ..)
+ Uqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo olungenamda (isantya esiyi-15 Mbs)
+ Umhombiso weflethi ulula, awuphucukanga kwaye uphefumlelwe sisitayile sakudala sama-Arabhu.
+ Inqaku lokugqibela ukongeza “Ipropathi icocekile icocekile!”
4.83 · Izimvo eziyi-99
Ipropathi ibekwe kwindawo entle ezolileyo; kumgama omfutshane wokuhamba ukusuka kwiklabhu yezemidlalo yaseMadinaty, isikhululo sebhasi kunye ne-South-West mall, enevenkile ezininzi, iikhefi kunye neenkonzo ngaphakathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Mamdouh